Author Topic: ဟာသဥာဏ်စမ်း အမေး/အဖြေ (Read 165662 times)
« Reply #320 on: May 10, 2012, 11:00:49 AM »
Quote from: zine zine on May 04, 2012, 09:15:42 PM
Quote from: zero0 on May 04, 2012, 12:50:38 PM
မိန်းမတိုင်းက အဲဒါကို ကြိုက်တယ် ... လက်နဲ့လည်း ခဏ ခဏ ကိုင်ကြည့်တယ် ... ဒါမျိုးသာ များများ လိုချင်ကြတယ် ... အဲဒါ မရှိရင်လည်း မနေတတ်ပြန်ဘူး ... နေ့တိုင်းလည်း အဲဒါကို အသုံးပြုတယ် ...
ဘာဖြစ်မလဲလေ ... သိရင် ဖြေကြပါဦးလားဗျာ .....
အော်... ရှင်းပါတယ် သိပ်တောင် မစဉ်းစားရပါဘူး င၀ိုင်းလေ ... ပိုက်ဆံပေါ့ဗျာ ဟုတ်ဘူးလား (မှားရင် မှားတယ်ပြောဦးနော်)
င၀ိုင်း/ပိုက်ဆံ/အသပြာ/ဒင်္ဂါး ... ဟုတ်ပဗျာ ... အိမ်ထောင်ရှင်အမျိုးသမီများဆိုရင် အဲဒါကြီးကို ပိုတောင်ကြိုက်သေးတယ် ... အပျိုတွေထက်ပို ကြိုက်သေးလေတယ် ... အပျိုတွေက သုံးတာပဲရှိတယ် ... အိမ်ထောင်ရှင်မများကတော့ ကျွန်တော့် မေးခွန်းထဲကအတိုင်းပဲလေ ...
စိတ်ဝင်စားစွာဖြေပေးလို့ +1 ပါဗျာ .....
« Reply #321 on: May 13, 2012, 01:19:29 AM »
Quote from: ယောင်္ကျားလေး april16 on May 08, 2012, 10:12:16 PM
china ကို တရုတ်
france ကို ပြင်သစ် လို့ဘာကြောင့်၊ဘယ်အချိန်တည်းက စခေါ်ခဲ့ပါသလဲ။
france ကို ကုန်းဘောင်ခေတန်မှာ ဖရန်စစ် လို့ခေါ်ရာကနေ ပြင်သစ်လို့ ဖြစ်လာတာပါ။
« Reply #322 on: May 17, 2012, 01:30:00 AM »
မြက်ပင်တောင်မှာ နွားစားဖို့ အသုံးဝင်ပါဦးမယ်...ဂျပန်မြက်ဆို ဈေးတောင် ကြီးသေး..
အပင်ကို ခုတ်တယ်ဆိုထဲက သစ်ခွ..သဇင် ကဲ့သို့သော် အပင်သေးမျိုး...မဟုတ်ပါ..ပင်စည်လုံးပတ်ကို ဓားနဲ့ ခုတ်တယ်လို့ ဆိုလိုပါတယ်...လက်ဖြင့်ချိုးလို့ ရတဲ့ အရွယ်အစားမဟုတ်ပါဘူး..
အသုံးမ၀င်ဘူးဆိုတာကလဲ ပင်စည်တခုတည်းကိုပြောတာပါ...အသီး.အရွက်..အရိပ် အသုံးဝင်နိုင်ပါတယ်...
ဥပမာ...ကန္တာရ ဆူးပင် ဆိုတာမျိုးပါ...အညာဒေသ..မန်းတလေး ဘက်မှာရှိပါတယ်..
သူကလဲ အပင်ကြီးပါပဲ..ပင်စည်ကိုတော့ ဓားနဲ့ခုတ်ရမဲ့ အရွယ်အစားပါ...
« Last Edit: May 17, 2012, 07:46:13 PM by chanthar »
« Reply #323 on: May 17, 2012, 02:10:35 PM »
« Reply #324 on: May 21, 2012, 11:58:36 AM »
အိုင်စတိုင်း ရေးခဲ့တဲ့ ညာဏ်စမ်းလေးတစ်ပုဒ်
Ebert Einstein wrote this enigma at the beginning of the 20th century, and said that 98% of the people in the world couldn’t solve it.
Inavillage there are5houses of different colors. In each one of these housesaman of different nationality lives, he hasadifferent animal, smokeadifferent brand of cigarettes and drinkadifferent kind of drink.
Using your logical thinking, can you tell who has the little fish, knowing that:
1. The English lives inaRed house.
2. The Swedish hasadog.
4. The Green house is on the left of the White house (which is closer to it).
6. Who smokes the Pall Mall has the little bird.
7. The owner of the yellow house smokes the Dunhill’s.
8. The owner of the central house drinks milk.
10. Who smokes the Dunhill’s lives close to the owner of the horse.
11. Who smokes the Blue Master drinks beer.
12. The German smokes the Prince.
13. The Norwegian lives close to the Blue house.
14. Who smokes the Blends hasaneighbor who drinks water and who has the cat.
မြန်မာလိုတော့ မပြန်တော့ဘူး နော် .. အဆင်ပြေကြမယ်ထင်ပါတယ် ..။ တော်တော် လေး ဦးနှောက်စားပါတယ်ဗျာ ..။ ပြောထားပါတယ် လူတရာမှာ 98% က ဒါကို မဖြေနိုင်ပါဘူးတဲ့ဗျာ ..။ဖြေနိုင်တဲ့လူကတော့ ဦးနှောက်တော်တော် ကောင်းတယ်လို့ ပြောရမယ်နော် ..။
သူငယ်ချင်းတို့ စိတ်ဝင်စားရင်ဖြေကြည့်လိုက်ပါနော် …အနော်တော့ ဖြေပြီးပြီဗျ။
အဖြေတော့ ကျနော်မ တင်ပေးသေးဘူးနော် ..။ အလွယ်နဲ့ ရရင် အလွယ်ထင်သွားမှာ စိုးလို့ ။ စိတ်အဆိုးနဲ့ နော် ..။ နောက်မှပဲ ကျနော် တင်ပေးပါမယ် ..။ခုတော့ ခြောက်လိုက်ကြပါအုံး သူငယ်ချင်းတို့ရေ .။
« Reply #325 on: May 22, 2012, 08:49:10 AM »
Quote from: ရာဂ on May 21, 2012, 11:58:36 AM
ငါးက ကော်ဖီ နဲ့ Prince စီးကရက် ကြိုက်တဲ့ အစိမ်းရောင်အိမ်က ဂျာမန်ကြီးဆီမှာပါ၊၊
« Reply #326 on: May 22, 2012, 10:16:29 AM »
« Last Edit: May 22, 2012, 10:33:55 AM by tunaye2011 »
« Reply #327 on: May 23, 2012, 07:39:45 AM »
Quote from: kagyimg on May 22, 2012, 10:16:29 AM
« Last Edit: September 25, 2012, 07:17:30 PM by hotsexygirl »
« Reply #328 on: May 24, 2012, 10:59:12 PM »
Quote from: y_cho! on May 22, 2012, 08:49:10 AM
ကိုရာဂ ဘယ်ရောက်နေလဲ သိဘူး
ဖြေထားတာ ဘာမှလဲ ပြန်မပြောဘူး
« Reply #329 on: May 27, 2012, 02:07:29 PM »
ဘယ်လိုနည်းနဲ့ဖြေမှာလဲ ရူပ သဘောနဲ့ဖြေမှာလား ဒသနိက လိုဖြေမှာလား